Izindaba - Olunye uhlobo lokugunda utshani lusebenzisa ungazi
Siyazi ukuthi kunezimo eziningi ze- izindwani zokugunda utshani, ngakho-ke kuba nzima kakhulu ngathi ukukhetha. Ungayikhetha kanjani imishini yokugunda utshani? Ungayilungisa kanjani i-blade yomgundi? Futhi ungayisebenzisa kanjani futhi uyigcine kanjani imishini yokugunda utshani? Umhleli olandelayo uzokwethula kuwe.
Ungayilungisa kanjani i-blade yomshini wokugunda utshani?
Lapho ulungisa i- blade isikulufa somshini wokugunda utshani, kuyadingeka ukuqinisa isikulufu, ukuyiguqula kube ngu-1 / 4-3 / 4, sikulunga ku-nut, usebenzise i-washer, uma iwashi lingahamba kalula, bese uqinisa umuthi bese ubheka iphedi futhi ukuthi ingabe i-blade ingahamba , uma isikulufu sicinene kakhulu, i-blade ngeke ihambe. Ngemuva kokuthi yonke into ifakiwe, i-test drive, i-blade isebenza umzuzu owodwa, thinta isikulufa ngesandla sakho, kuyashisa noma kuyashisa kakhulu, i-blower cutter blade ikhombisa ukuthi isikulufu siqinile, sicela ulungise futhi.
Yenza umsebenzi omuhle ekunakekelweni kwezinhlamvu zokugunda utshani
Umshini wendabuko wokhula wensimu yezithelo awusakwazi ukuzivumelanisa nefomu elikhona lokutshala insimu, kanye nomsiki omusha webhulashi blade ibhulashi umsiki ingahlangabezana ngokugcwele nezidingo zamanje zokusebenza kokhula lwezithelo. Ukusetshenziswa kwabasiki bamabhulashi bemisebenzi yokususa ukhula kungathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi. Izisiki zamabhulashi zingagcinwa phansi ukuvimbela ukuguguleka kwenhlabathi, ukuhlobisa imvelo, ukugcina amanzi nokubika umswakama, nokwandisa izinto eziphilayo zenhlabathi.
Ungayisebenzisa kanjani ngokuphepha ama-brush cutter blades
A. Sebenzisa uphethiloli ofanelekile kanye ne-oyili yenjini, futhi uqinisekise isilinganiso sokuxubana kwensimbi yokusika ibhulashi (25: 1 noma 50: 1).
B. Njalo (amahora angama-25) hlola bese ufaka isihlungi somoya ne-spark plug.
C. Ngemuva kokusebenza nethangi likawoyela, kufanele uphumule imizuzu eyi-10, bese uhlanza i-gasket evulekile yomshini ngemuva komsebenzi ngamunye ukuqinisekisa ukushabalalisa ukushisa.
D. Lapho ugcina, kufanele uhlanze umzimba, uyeke uphethiloli oxubekile, i-brush cutter blade ishisa uphethiloli ku-vaporizer, isuse ipulagi le-spark, engeza u-1-2ml wamafutha kwisilinda, udonse i-starter 2-3 izikhathi, Faka i-plug plug.
Ubude bekhiya yenayiloni yensimbi yokusika ibhulashi kufanele bulawulwe (= 15cm). Lapho usebenzisa i-blade yensimbi yokusika ibhulashi, ibhalansi yensimbi kufanele iqinisekiswe, futhi i-blade enokudlidliza akufanele isetshenziswe.
(1) Intambo-yotshani wethenda okulula ukusika.
(2) Isikwere blade-ikakhulukazi sezinkinga ezinzima futhi ezinomhlwenga njengomhlanga.
(3) Izindwani zeRhombus-zemivini, izihlahlana ezincane, nezinzima.
Ukufakwa kwentambo yokugunda utshani
Hlakaza ikhanda lokusika, bese ukhipha ingqikithi ejikelezayo ngaphakathi bese uphendukezela intambo yokugunda. Ubude bezintambo zokugunda akumele bube bude kakhulu, u-10-15cm ulungile, akulula ukushaya, akulula ukulawula, futhi kulula ukugqashula. Lapho ufaka, bopha ifindo kushaft noma ekhanda lokugunda, bese ukhipha intambo ohlangothini oluhlukile, ngaphandle kwalokho intambo izophuma ngesikhathi senqubo yokugunda; ubude bezintambo zokusika emaphethelweni womabili kufanele bufane, ngaphandle kwalokho ithuba lokugunda lizofinyezwa ngenxa yokungalingani. Intambo yokugunda utshani ilungele kuphela ukugunda utshani obuncane, obukhulu kakhulu, ngisho notshani obudala obuqinisiwe, bufuna ukusikwa ngensingo. Okulandelayo yindlela yokufaka i-windumgundi wotshani intambo yokugunda.
(1) Susa ikhanda lokugunda, kunendawo yentambo yokugunda ngaphakathi.
(2) Songa intambo yokugunda ibe uhhafu, uyijamu endaweni lapho kulinywe khona intambo yokugunda, bese uyiphephetha ngaphakathi.
(3) Lapho ukubambeka sekuqedile, dlulisa intambo yokugunda ngaphandle kwezimbobo ezinhlangothini zombili.
Ukukhethwa kwe- umshini wokugunda utshanikubaluleke kakhulu. Ngezikhathi ezahlukahlukene nokukhethwa kwensimbi yokugunda utshani, kufanele ukhethe i-blade mower blade efanele. Ngaphezu kwalokho, ngikhumbuza wonke umuntu ukuthi kufanele ukhethe izindwani zabakhiqizi besayizi. I-Hangzhou Zhengchida Precision Machinery Co, Ltd. iyaholanomkhiqizi ingadi imishini izindwani eChina Siyakwamukela ukuthenga.